China 8 in 1 combo fanaovana milina fanaovana milina fanaovan-tserasera | Taile
Ity milina fanontam-pirinty 8 in 1 ity dia azo ampiasaina amin'ny T-shirt, satroka, takelaka seramika, taila keramika, mugs, coaster, pad mouse, ankamantatra, litera, sns hafa. lamba sy fitaovana. Izy io dia afaka mamindra sary miloko sy tarehin-tsoratra amin'ny fanitsiana sy ranomainty fanontana vita amin'ny seramika, solomaso sy lamba toa ny landihazo, rongony, fibre simika, nylon, sns.
1.Signing Swinging - miaraka amin'ny fivezivezena, 360 fihodinan'ny sandry izay mampihetsika soa aman-tsara ireo singa fanafanana, bokotra fanitsiana faneriterena feno izay mahatonga ny fanontana azo antoka, mampihena ny lozam-pifamoivoizana tsy ampoizina.
Kalitao azo ianteherana - Kitapo fanaovan-tsindry hafanana combo kit-12 "x 15" takelaka fanafanana, 6 "x 3" singa fanamafisam-peo / satroka, 5 "/ 6" singa fanamainana lovia seramika, 4,71 "x7.48" (9OZ) / 4.72 "x9.05" (11OZ) / 12OZ / 17OZ tavoahangin-drano, mug / kaopy tapered, solifara latte mug pint latte.
3. Pressure Adjustable - presse mafana miaraka amina bokotra fanitsiana tsindry feno, izay azo ahitsy arakaraka ny hatevin'ny fitaovana. Ny sehatra ambany malefaka dia azo esorina ary azo soloina mora foana amin'ny tany am-boalohany amin'ny alàlan'ny fampiasana visy fotsiny Phillips. Sady pad silika no landihazo azo afindra.
4.Fifehezana nomerika mialoha - fanaraha-maso LED dizitaly, velarana tsy miraikitra, miaraka amina fotony alimina nohavaozina namboarina, ampiasaina amin'ny kaopy, satroka ary singa malemy; fitaovana amin'ny fanaraha-maso dizitaly sy fanaraha-maso ny mari-pana marina, azonao atao ny manamboatra ny masinina arakaraka ny fitaovana samihafa Napetraka amin'ny fotoana sy mari-pana irina. Rehefa tonga ny ora voatondro sy ny mari-pana dia hisy feo fanairana maheno ary hijanona tsy hanafana ny singa.
5.Ny milina fanodinana hafanana miaraka amin'ny bokotra faneriterena feno -ho fanitsiana, azo ahitsy arakaraka ny hatevin'ny fitaovana. Sehatra ambany azo esorina, Mora mifanakalo amin'ny singa hafa (Mila mpamily Screw Phillips fotsiny). Pad silika azo esorina sy landihazo. Fius namboarina ho an'ny fampiasana azo antoka
6.Maro ny fampiasana azy - ny milina fanodinana hafanana natokana ho an'ny indostrialy, matihanina, studio kely ary fampiasana manokana. Ny milina fanamafisam-peo 8-in-1 dia azo ampiasaina amin'ny T-shirt, satroka, takelaka seramika, tile, kaopy, morontsiraka, piozila, litera ary zavatra maro hafa. Raha manana fanontaniana momba ny lamba sy ny fitaovana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
7. Fiantohana fahafaham-po. Raha tsy afa-po ianao noho ny antony rehetra, azafady mba ampahafantaro anay ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia hanao izay azonay atao mba hanampiana anao.
8.Fanamarihana: Aza avela hifanakaiky ny takelaka fanaovana takelaka ny tariby .Raha tsy fisaka ny takelaka fanafanana, azafady mba jereo aloha raha apetraka eo amin'ny toeram-piasana ny masinina, ary alao antoka fa tsy hihozongozona ny takelaka fanafanana fanitsiana ny bokotra fanindriana mba hahazoana antoka fa ampiharina ny tsindry ampy.
Halavan'ny mari-pana avo indrindra (℉)
Fanaraha-maso ny famantaranandro
0 - 999 segondra
Haavo azo ovaina
13 1/2 "ka hatramin'ny 17"
Refy (w / platen press)
Platen Press (mifono telfon)
Press / Hat Press
6 "x 3" (miolakolaka)
2 "-2,75" savaivony (6OZ)
3 "-3,5" savaivony (11OZ)
Mug latte 12OZ (Cone)
5 "savaivony max
6 "savaivony max
Teo aloha: Masinina fanontana hafanana 5 amin'ny 1 combo
Manaraka: Masinina fanaovan-gazety 4 amin'ny 1 cap
8 Ao amin'ny 1 Combo Heat Press Machine 29 * 38
Heat Machine 5 amin'ny 1
Heat Machine 8 amin'ny 1
Heat Press Machine 9 ao anatin'ny 1